Daawo+Akhriso+Dhageyso Afar Jamaaco Jihaadi Ah Oo Midoobay – Calamada.com
Daawo+Akhriso+Dhageyso Afar Jamaaco Jihaadi Ah Oo Midoobay
calamada March 6, 2017 4 min read
Dalka Maali waxa uu kamid yahay wadamada Muslimiinta ee dhaca galbeedka qaaradda Afrika, waxaana ka socda mid ka mid ah dagaallada ugu adag ee casrigan dhexmaraya Kufriga iyo Islaamka.
Wuxuu dalkan Jihaadka ka billowday sanadkii 2013, kolkaas oo ciidamo aad u farabadan oo katirsan Mujaahidiinta ay si lama filaan ah kula wareegeen magaalooyinka dhaca wuqooyiga wadanka.
Mujaahidiinta waxaa xilligaas ay ka faaâ€™ideysteen inqilaab lagu sameeyey dowladdii ka jirtay dalka Mali ee ay Reer galbeedku wateen, waxaana markaas kadib magaalooyinkii ay ku dhaceen gacanta nidaam Islaami ah oo dadka wadankaas tusay waxa uu yahay Islaamka, iyo wanaaga ku dhaqanka shareecada Islaamka.
Cadaawada gaalada oo ah mid Allah quraanka uu ku sheegay islamarkaana ah mid aad u fog ayaa waxaa dhacday in markii gaaladu ay arkeen sharciga Allah oo lagu maamulayo dhulka Maali in ay indhaha ka fiirsan waayaan Nuurka Islaamka ee halkaas ka hana qaaday, waxayna ku dhawaaqeen xamlo saliibi ah oo ay ku doonayaan in dhulkaas ay kaga saaraan Mujaahidinta.
Dowladda Faransiiska ayaa qaadatay dowrka ugu muhiimsan iyo hogaaminta xamladaas shareeca la dirirka ah, maadaama ay horey usoo gumeysatay dalka, ayna tan iyo markaas ku ilaalsan jirtay maamul maqaar saar ah oo dabadhilif u ah gaalada, ugu dambeyntiina meesha laga saaray
Waxaa duulaankeeda garab uu ka helay intabadan dowladaha caalamka kufrisga sida Maraykanka, Ingiriiska iyo dowladaha mandiqadda.
Mujaahidiintu markii ay arkeen xamlada kusoo wajahan waxya qaateen khiyaarka ah dagaalka jabhadeynta, waxaana ay ka inxiyaazeen magaalooyinkii waaweynaa ee ay ku maamulayaan shareecada Islamka sida Kidal, Gaawa iyo Timbokhto iyo kuwa kale.
Waxay billaabeen Mujaahidiintu dagaallo kudhufo oo ka dhaqaaq ah, qaraxyo, weeraro gaadmo ah iyo weerarada dheelmadka ah kuwaas oo wiiqay awoodda ciidamada isbaheysiga ahaa, kuna qasabtay iney si taxadar leh uga kala gudbaan magaalooyinka Maali.
Afar sano kadib xamaladaas, Jihaadka Maali wuu sii bullaalayaa, Wuxuuna hadda marayaa meel ka sii adag halkii uu taagnaa sanado ka hor.
waxaana Mujaahidiintu maamulaan deegaano saxaraha ku yaala, iyagoona fursad wanaagsan u helay iney diinta Islaamka gaarsiiyaan dadka ku nool meelaha ka fog magaalooyinka, ayna soo jiitaan qowmiyadaha mulsimiinta ee dhulkaas degan.
Sida lagu daawaday filimaan dhowr ah oo ay soo saareen jamaacaadka ka dagaalama dalkaas, waxaa sii kordhay awoodda Mujaahidiinta, kuwaas oo haatan qaadaya weeraro lagu xasminayo xeryaha cadowga, caamliyaad qorsheysan oo istish=haadiyo ah, weeraro adag oo kamaaâ€™in ah, iyo noocyada kala duwan ee dagaalka.
Hadaba si looga farxiyo Muslimiinta, loona raja geliyo Muslimiinta fiirsanaya jihaadka ka socda halkaas, loona qaato amarka Allaah, loona mideeyo awoodda Mujaahidiinta, waxay jamaacaadka saadiqiinta ah ee ka howlgala dalka Maali ay qaadeen tallaabo ku dayasho leh oo ka farxisay guud ahaan Muslimiinta Caalamka, taas oo ah iney ku dhawaaqeen iney gaareen midnimo buuxda, kuna midoobeen, hal magac, hal raayo iyo hal Amiir.
Muâ€™assasa lagu magacaabo Muâ€™asasatu Al-Zallaaqa ayaa baahisay kalimad lagu iclaamiyay iney midoobeen ilaa saddex urur oo ka mid ah ururada ugu waa weyn ee ka dagaalama dhulka Saxaraha ee galbeedka Africa, islamarkaana ay yeesheen hal hadaf oo ah sidii loo xureyn lahaa dhulalka Muslimiinta, loona raadin ku dhaqanka shareecada islaamka
Muuqaal ay muâ€™assasasadu ku baahisay baraha internetka waxaa ka soo muuqanaya hogaamiyeyaal dhowr ah oo kala matalaya ilaa saddex jamaaco oo jihaadi ah, kuwaas oo iyagoo is garab fadhiya ku dhawaaqaya goâ€™aanka midnimada.
Masâ€™uuliyiinta filimka ka soo muuqanaya waxaa kamid ah masâ€™uulkii hore ee Jamaacada Ansaarudiin Sheykh Iyaad Agha Ghaali, amiirka imaarada Saxaraha Yaxya Abul Hamaam, ku xigeenka amirka Jamaacada Al=Muraabidhuun hogaamiye Al-Xasan Ansaari, iyo hogaamiye katirsan Mujaahidiinta Alqaacida oo lagu magacaabo Abuu Cabdi raxmaan Al-Sinhaaji, iyo sidoo kale masâ€™uul kale oo lagu magacaabo Muxamed Koofaa.
Waxaa bayaanka midnimada akhriyay Sheykh Iyaad Agha Ghaali xafadihaullaah, kaas oo ugu horeyn kalimadiisa kaga sheekeeyay fadliga midnimada, isagoo sidoo kalena soo hadal qaaday juhdigii hogaamiyaashii Jihaadka soo maray oo uu kamid yahay Shahiidul Ummaah Sheekh Usaama ay ku bixiyeen sidii loo mideyn lahaa umadda Islaamka.
Intaa s kadib sheikh Iyaad wuxuu ku dhawaaqay warka ka farxiyay Muslimiinta ee ah iney midoobeen Jamaacaadka jihaadiga ee Maali.
â€œ innagoo u hogaansameyna amarka Allah ee ah in lagu midoobo xarigiisa, iyo in la mideeyo safka, lana reebo kala taga, waxay Mujaahidiinta Maali umadooda Muslimka ah u sheegayaan iney ku midoobeen jamaacaadkan saddexda ah, Ansaaru-diin, Al-Muraabidhuun iyo imaarada Mandiqadda saxaraha hal jamaaco, iyo hal amiir hoostiisa, si si isku mid ah loo hor istaago xamalda Saliibiga ee gumaysi doonka ahâ€ ayuu yiri sheikh Iyaad Agha Ghaali oo filimka lagu sheegay inuu yahay amiirka cusub ee Jamaacadan oo loo bixiyay Jamaacada u hiilinta Islaamka iyo Muslimiinta.
Waxaana sheekhu intaas ku daray iney u cusbooneysiiinayaan beycadooda hogaanka sare ee Mujaahidiinta Alqaacida Sheykhul Xakiim Ayman Aldawaahiri.
Ugu dambeyn Mujaahidiintu waxay baaq u direen Mujaahidiinta Shaam iyagoona ka codsaday iney noqdaan kuwa looag daydo midnimada, ayna sii xoojiyaan sidii Mujaahidiinta dhulkaas oo dhami u midoobi lahaayeen.
Noocyada kala duwan ee warbaahinta Reer galbeedka ayaa aad u hadal haya midnimada ay gaareen Jamaacaadkan saddexda ah oo ah awood aan la dhayal san Karin, waxaana Inshaa Allaah la filayaa in miraha mindimadooda laga arko mardhow saaxaadka gumaca iyo baaruudda.
Halkan Ka Dhageyso Warbixin Filimka Ka Hadleysa.
Halkan Ka Degso Filimka.
Halkan Hoose Ka Daawo Filimka Midnimada Jamaacaatka Afarta Ah.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 07-06-1438Hijri.
Next: Cumar Cabdiâ€Amisom 10 Sanno kadib uma Hirgalin Qorshihii Duulaankoodaâ€(Maqal).